AMBALAMANASY SY MANGARANO FAHAROA : Mitaky ny hametrahana biraon’ny Polisy ny vahoaka
Tato ho ato, nahitana fihenana kely ny asa fanafihana mitam-piadiana ataon’ireo jiolahy eny amin’ny Fokontany Mangarano faharoa sy eny Ambalamanasy eny. 26 avril 2017
Ny ezaky ny Polisim-pirenena, manao fisafoana tsy tapaka amin’ireto fokontany ireto no voalazan’ireo fokonolona ho nampihena izany asa ratsin’ny jiolahy izany.
Mahatsiaro afa-doza tokoa ny fokonolona manoloana izany ezaka izany saingy mahita kosa ny mponina amin’ireto tanàna roa ireto fa tsy mahatonga lavitra ity ezaka fisafoana faobe ataon’ny Polisy ity, fa ny tena vahaolana mahomby dia ny fametrahana toby na biraon’ny Polisy hapetraka eny amin’ireto fokontany roa ireto, toy izay napetraka eny amin’ny “Stadium Barikadimy”.
Amin’izay fotoana izay dia ny fiantohana ny fahalemana amin’ireto fokontany roa ireto sy ny manodidina no tena asa hiantsorohan’ity biraon’ny Polisy ity. Hihena tokoa ny asan-jiolahy raha tanteraka izany. Ankoatra ny fametrahana ity biraon’ny Polisy ity dia tokony hovelomina indray ihany koa ireo “vigie” misy eto Toamasina, toy ny eny Antsampanana hiditra amin’ny Lapan’ny Faritra Mangarano faharoa iny, hoy hatrany ny fanhatahan’ny fokonolona teny an-toerana.